किन खानुहुँदैन साउनमा माछा मासु, किन व्रत बस्ने – Sandesh Press
किन खानुहुँदैन साउनमा माछा मासु, किन व्रत बस्ने
July 26, 2021 471
साउन महिना, धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि विशेष महिना । यो महिनामा केही धार्मिक पर्वहरु पनि पर्छ । यो साउने संक्रान्तिको महिना हो । यो बोलबमको महिना हो । भगवान शिवको आरधानाको महिना हो । उपवासको महिना हो ।
पूर्विय दर्शन अनुसार साउन महिनामा भगवान शिवको आरधना गर्ने, उपवास बस्ने, शिवलिंगमा जल अर्पण गर्ने गरिन्छ । धार्मिक मान्यता के छ भने, साउनको सोमवार व्रत बस्ने र शिवलिंगमा जल चढाउनाले घरमा सुख समृद्धि मिल्छ ।
भलै अहिलेका पुस्तालाई यी कुरा भलै धार्मिक आडम्बर लाग्न सक्छ । वा यो केवल परम्परा मात्र लाग्न सक्छ । तर, धार्मिक परम्परासँग जोडिएर आएका यी कुराहरुसँग विज्ञान पनि जोडिएर आएको छ । साउन महिनामा किन शिवको पूजा गरिन्छ, किन उपवास बसिन्छ, किन वोलवल धाउन गरिन्छ ? यी सबैको वैज्ञानिक तर्क दिन सकिन्छ ।
साउन महिना, जो मध्य बर्षायामसँगै जोडिएर आउँछ । असारको चटारो सक्न नभ्याउँदै साउन महिना आउँछ । यतिबेला खेती किसानी गर्नेहरुले बालीनाली लगाएर विश्राम लिने बेला हुन्छ । तपाई, हामीलाई थाहै छ, हाम्रो देश कृषिमा आधारित छन् । धेरैजसो जन-जीविका खेतीपातीबाटै धानिएको छ ।
खेतीको कुरा जोड्नुको अर्थ के भने, साउन महिना किसान बर्गका लागि पनि विशेष हो । खेतीपातीको चटारोबाट विश्राम लिएर मनलाई धर्मकर्ममा लगाउने बेला हो यो । धार्मिक आस्थाको रुपमा मात्र होइन, हाम्रो जीवन पद्धतीसँग जोडिएका कुरा हुन् यी
Prevसन्सारलाई चकित पार्दै बाहिरियो यस्तो रहस्य? यी हुन् श्रीमतिको साटो गर्भाधान गर्ने पुरुष
Nextश्रीमानलाई असाध्यै माया गर्छन यी ४ राशीका श्रीमती, हरेक पलमा दिन्छन् साथ
फेरी अर्की अभिनेत्रीले छोडिन् संसार
‘भ्वाईस अफ नेपाल’बाट बाहिरिएपछि चौरमा चटपटे र काक्रो बेच्दै एलिना । छाक टार्न गाह्रो भो, बुढि आमा पाल्नुछ,कसैले गीत गाउन दिएन (भिडियो हेर्नुस)
बज्यो खतराको घन्टी ! जे नहुनु थियो त्यही भईदियो : हेर्नुहोस
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (10984)
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (10497)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (7781)
मुस्ताङका स्‍थानीय भन्छन् : घासामा ठूलो आवाज सुन्यौँ, आगो बलेको देख्यौँ (7510)